Xageey Ku Danbeeyaan Gabdhaha Chibok
Todobaadki lasoo dhaafay kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria ayaa soo saartay muuqaal tusinaya qaar ka mid ah gabdho ciyaal iskuul ahaa oo ay ka afduubteen deegaanka Chibok ee gobolka Waqooyi bari ee dalkaasi muddo iminka laga joogo laba sano.
Afuubka gabdhahaasi ayaa dhaliyey olole caalami ah oo loo bixiyey Bring Back Our girls oo macnaheedu yahay dib usoo celiya gabdhaheena. Dadka hormuudka ka ah ololahan ayaa waxaa ka mid ah Bukky Shoonibaari oo ah gabardhalinyara ah oo u dhalatay dalka Nigeria.
Dhawaan ayey dalka Mareykanka u timid shirka Dhalinyarada Hormuudka ka ah Qaarada Africa ee Yali.
Hadaba, wariyaha VOA-da Nur Bukhari, oo gabadhani kula kulmay magaalada Williamsburg ee gobolka Virginia ayaa Bukky kala sheekeysta arrinta gabdhahan, ugu horreynna wuxuu weydiiyey waxa ay kala socoto dhibka gaaray gabdhaha Chibok.
Wareysiga oo af-ingiriisi ahaa, waxaa inoo soo koobaya Jamac Bulle Jamac iyo Nur Nukhari.
Wareysiga ku saabsan gabdhaha Chibok ee dalka Nigeria